Saafi Films - News: DAAWO SAWIRO:Ciidamada huwanta oo fariisimo ka sameystay xarumihii dowlada ee Kismaayo
DAAWO SAWIRO:Ciidamada huwanta oo fariisimo ka sameystay xarumihii dowlada ee Kismaayo
Ciidamada huwanta ah ee maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa duleedyada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la sheegay in ay maanta la gudaha u galeen Kismaayo.
Ciidamada oo wata hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay fariisimo ka samaysteen waddooyinka laga soo galo magaalada Kismaayo iyo xarumihii ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo dekeda magaalada Kismaayo.
Wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in ciidamadan aysan wax iska caabin kala kulmin magaalada iyadoo hore gudaha magaalada Kismaayo loogu diley dad rayid ah.
General Saxardiid oo horkacaya ciidamada dowlada ayaa sheegay in ay xasilinayaan ammaanka magaalada Kismaayo ayna ammaankii iyo kala dambayntii dib ugu soo celinayaan kadib inkudhow lix sano markii ay gacanta ku hayeen maamulka degmada Kismaayo ururka Alshabaab.
Generalka Saxardiid ayaa ugu baaqay hay�adaha samafalka inay magaalada Kismaayo gargaar la soo gaaraan isla markaana ay damaanad qaadayaan ammaanka shaqaalaha gargaarka.
4,531,176 unique visits